အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ယူရာတွင်ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်နှုန်းပြောင်းလဲသွားသည့် နှုန်းထားအရ မည်မျှပေးဆောင်ရမလဲ။ ပေးဆောင်သင့်သလား? - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ယူရာတွင်ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်နှုန်းပြောင်းလဲသွားသည့် နှုန်းထားအရ မည်မျှပေးဆောင်ရမလဲ။ ပေးဆောင်သင့်သလား?
28 Nov 2019 2:09 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
3304 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားမည်သူမဆို အခြေပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ် ကို ၀ယ်ယူခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရယူခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအသစ်တည်ထောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းထပ်မံတိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသည့်ဝင်ငွေမှ ၀င်ငွေရလည်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိလျှင် စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ၀င်ငွေအပေါ် ပေးဆောင်ရသည့် အခွန်နှုန်းထားကို လျော့ပေါ့၍ သက်သာခွင့် ပေးထားတာ ကို အောက်ပါ အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါသည်။
တစ်ကျပ် မှ သိန်းတစ်ထောင်အထိ ၃%
သိန်းတစ်ထောင့်တစ်ကျပ် မှ သိန်းသုံးထောင်အထိ ၅%
သိန်းသုံးထောင်တစ်ကျပ် မှ သိန်းတစ်သောင်းအထိ ၁၀%
သိန်းတစ်သောင်းတစ်ကျပ် မှ သိန်းသုံးသောင်းအထိ ၁၅%
သိန်းသုံးသောင်းတစ်ကျပ် နှင့် အထက် ၃၀%
တိုင်းကာလတန်ဖိုးစိစစ်ရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်သော မြေကွက်တန်ဖိုးအပေါ် အထက်ပါအတိုင်း ၀င်ငွေခွန် ပေးဆောင်ပြီး တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၄%၊ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်တင်ခ ၀.၅% ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
အခွန်သက်သာခွင့်နှုန်းထားများသည် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ (၁)ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ (၃၀) ရက်အထိသာ အကျိုးသက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး နောက်နှစ်တွင် သက်သာခွင့်ပြုမပြုသည် ထပ်မံပြဌာန်းမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ထွက်မှသာ သိရှိနိုင်မှာဖြစ်သောကြောင့် အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ယူထားသူများအနေဖြင့် သက်သာခွင့်ပေးထားသောနှုန်းထားသစ်အရ ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်မှာ ယခင်နှစ်နဲ့ယှဉ်လျှင် များစွာသက်သာသွားတာကြောင့် အခွန်ဆောင်ပြီး မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုကြရန် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ထိုမှသာ မိမိတို့ဝယ်ယူထားသော အိမ်ခြံမြေများသည် ဥပဒေအရ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာသွားမှာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်ရောင်းချရာတွင်လည်း အဆင်ပြေချောမွေနိုင်မှာဖြစ်သောကြောင့် ဆောလျင်စွာ အခွန်ပေးဆောင်ပြီး မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုကျရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
၂၀၁၉ခုနှဈ၊ ပွညျထောငျစု၏အခှနျအကောကျဥပဒအေရ နိုငျငံသားမညျသူမဆို အခွပေစ်စညျးတဈရပျရပျ ကို ဝယျယူခွငျး၊ တညျဆောကျခွငျး၊ ရယူခွငျးနှငျ့ လုပျငနျးအသဈတညျထောငျခွငျး၊ လုပျငနျးထပျမံတိုးခြဲ့ ဆောငျရှကျခွငျးတို့အတှကျ အသုံးပွုသညျ့ဝငျငှမှေ ဝငျငှရေလညျးတငျပွနိုငျခွငျးမရှိလြှငျ စညျးကွပျမှုမှ လှတျကငျးနသေော ဝငျငှအေပျေါ ပေးဆောငျရသညျ့ အခှနျနှုနျးထားကို လြော့ပေါ့၍ သကျသာခှငျ့ ပေးထားတာ ကို အောကျပါ အတိုငျးတှရေ့မှာဖွဈပါသညျ။
တဈကပျြမှ သိနျး တဈထောငျအထိ ၃%
သိနျးတဈထောငျ့တဈကပျြမှ သိနျး သုံးထောငျအထိ ၅%
သိနျးသုံးထောငျတဈကပျြမှ သိနျးတဈသောငျးအထိ ၁၀%
သိနျးတဈသောငျးတဈကပျြမှ သိနျးသုံးသောငျးအထိ ၁၅%
တိုငျးကာလတနျဖိုးစိစဈရေးအဖှဲ့မှ သတျမှတျသော မွကှေကျတနျဖိုးအပျေါ အထကျပါအတိုငျး ဝငျငှခှေနျ ပေးဆောငျပွီး တံဆိပျခေါငျးခှနျ ၄%၊ စာခြုပျစာတမျးမှတျပုံတငျတငျခ ဝ.၅% ပေးဆောငျရမှာဖွဈပါသညျ။
အခှနျသကျသာခှငျ့နှုနျးထားမြားသညျ ၂၀၁၉ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာ၊ (၁)ရကျနမှေ့ ၂၀၂၀ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာ၊ (၃၀)ရကျအထိသာ အကြိုးသကျရောကျမှာဖွဈပွီး နောကျနှဈတှငျ သကျသာခှငျ့ပွုမပွုသညျ ထပျမံပွဌာနျးမညျ့ ၂၀၂၀ခုနှဈ၊ ပွညျထောငျစု၏ အခှနျအကောကျဥပဒေ ထှကျမှသာ သိရှိနိုငျမှာဖွဈသောကွောငျ့ အိမျခွံမွဝေယျယူထားသူမြားအနဖွေငျ့ သကျသာခှငျ့ပေးထားသောနှုနျးထားသဈအရ ပေးဆောငျရမညျ့အခှနျမှာ ယခငျနှဈနဲ့ယှဉျလြှငျ မြားစှာသကျသာသှားတာကွောငျ့ အခှနျဆောငျပွီး မှတျပုံတငျစာခြုပျခြုပျဆိုကွရနျ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။ ထိုမှသာ မိမိတို့ဝယျယူထားသော အိမျခွံမွမြေားသညျ ဥပဒအေရ တရားဝငျပိုငျဆိုငျမှု ခိုငျမာသှားမှာဖွဈပွီး နောကျတဈခြိနျပွနျလညျရောငျးခရြာတှငျလညျး အဆငျပွခြေောမှနေိုငျမှာဖွဈသောကွောငျ့ ဆောလငျြစှာ အခှနျပေးဆောငျပွီး မှတျပုံတငျစာခြုပျခြုပျဆိုကရြနျ အကွံပွုအပျပါသညျ။
အခွန် အရောင်းအဝယ် အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
245 သိန်း (ကျပ်)
ကမာရွတ်မြို့ နယ်ဗဟိုလမ်းမပေါ် ၊ BRB မှတ်တိုင်အနီးရှိ...
Business Tower for Rent Near Junction City and Aung San Stadium with Affordable Price